ब्लुटुथ-हेडसेट PLANTRONICS M55 को अवलोकन
PLANTRONICS M55 - एक सस्ती हेडसेट। सामान्यतया, सुविधाहरू यस्तै सेट उच्च वर्ग को मोडेल भेटिए। नोट को पनि किरा मा एडप्टर उपस्थिति छ।
PLANTRONICS M55 को M25 मोडेल मिल्दोजुल्दो छ। मात्र फरक डिजाइन र वितरण को स्कोप छ। त्यहाँ एक कम्प्याक्ट एडप्टर छ, र चुरोट लाइटर, USB इनपुट पाए। यो हेडसेट संकुचित छ। अगाडि प्यानल कालो चमकदार प्लास्टिक बनेको छ।
प्रतिक्रियाको यो सामाग्री मा केही टिप्पणीहरू पाउन सकिन्छ। प्रयोगकर्ताहरूको संख्या अनुसार, यो सजिलै scratched छ र औंलाहरु सतह रहने। को अन्त्य मा Perforated कालो प्लास्टिक छ। वक्ता जाल कवर। Perforated प्यानल उपकरणको उपस्थिति धेरै असामान्य छ बनाउँछ। को रियर भाग मा त्यहाँ इनपुट microUSB छ। उहाँले एक प्रालंब द्वारा कवर छैन। सम्मेलन राम्रो छ। केही अन्तर्गत सङ्कुचन creaks।
लगाएका बाटो, आराम
PLANTRONICS M55 हेडसेट विशेष जमानत वा बिना थकित गर्न सकिन्छ। चिपके संलग्न भएको प्रक्षेपण संग, सामान्य, हटाउन सकिने संग बदलिएको छ। यो सुविधाजनक कान मा स्थित छ। को PLANTRONICS हेडसेट टोपी अन्तर्गत वा धेरै सजिलै देखिने लामो कपाल M55। सबै को Ergonomics यो मोडेल मा क्रममा छ। उपकरण बेचैनी बिना लामो समय को लागि थकित गर्न सकिन्छ। अगाडि प्यानल बहु-समारोह बटन छ। यसलाई स्विच गर्न बीच धेरै रेखाहरू जोडी मोड समावेश, कल जवाफ दिन्छ। अन्त्यमा त्यहाँ पावर बटन छ। यो समाधान यो तपाईं चाँडै स्लिप मोडमा उपकरण स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ, धेरै सुविधाजनक छ। फलस्वरूप, ब्याट्री जीवन धेरै बिस्तारै खर्च गरिएको छ।
विपरीत पक्षमा एक मात्रा नियन्त्रण बटन छ। यो प्रक्रिया चक्र हुन्छ। कुनै समस्या व्यवस्थित। सबै तार्किक संगठित छ। अगाडि प्यानल मा सूचक प्रकाश। उहाँले रातो बारी गर्न सक्षम छ। उदाहरणका लागि, यो तपाईं जोडी मोड सक्रिय हुँदा हुन्छ। दावी ब्याट्री जीवन कुराकानी को 11 घण्टा छ। उपकरणको अघिबाटै जान्ने काम मा 11 दिनको लागि सक्षम गर्न सकिन्छ। तपाईं चार्ज उपकरण बन्द भने, यो ऊर्जा संरक्षण गर्न5महिना को सक्षम छ। यी सूचकहरू धेरै सभ्य छन्। यो उपकरणबाट आवाज गुणस्तर र सबै राम्रो छ। conjugation समस्या अवलोकन छ। सबै सही र चाँडै।
हामी पहिले देखि नै हेडसेट PLANTRONICS M55 को सुविधाहरू वर्णन गरेका छन्। यो उपकरण को समीक्षा तल वर्णन गरे। सदस्य कस स्थिर चुच्चो, सुधारिएको डिजाइन र कार्यक्षमता देखि छुटकारा को तागत उल्लेख निर्माता को अघिल्लो मोडेल संग तुलना। उपकरणको मल्टिमिडिया गुणहरू प्रशंसा चापलूसी संगीत प्रेमीहरूलाई आफ्नो समीक्षा मा पनि छन्।
यो मोडेल को तागत मा टिप्पणी अक्सर दुई फोन संग साथ काम को संभावना उल्लेख छ। आवाज उपस्थिति मालिक पनि प्लस रेकर्ड उत्प्रेरित गर्छ। दर्शक सकारात्मक को एक उपकरण गर्न मुख्यतया भन्छिन्, त्यहाँ उपस्थिति बारेमा केही साना कैफियत छन्। अब तपाईं हेडसेट PLANTRONICS M55 बारेमा आवश्यक सबै थाहा छ। फोटो उपकरणहरू यो सामाग्री संलग्न।
Nokia 2700 - फोन को एक सिंहावलोकन
फोन आफैलाई मा वक्ता कसरी सफा गर्न
संयुग्मी साँचो, बाह्य, विकर्ण। को pelvic स्त्रीको आयाम
ड्रैगन को वर्ष मा जन्म। सुविधा
एक बजार अर्थव्यवस्था मा लगानीको विशेष महत्त्व
किन सक्दैन ठाउँ जनावर र मानिसहरूलाई मा प्रजनन?
राष्ट्रपति फ्रेंकोइस Hollande: जीवनी, राजनीति, व्यक्तिगत जीवन
कसरी बियर पेट को छुटकारा प्राप्त गर्न?
पेन्सन "Repin": को Leningrad क्षेत्र मा बिदा, फोटो र समीक्षा